Ani Johar Muhammed tuqame jedhee murtii kana hinfudhanne. - Oromia Shall be Free
WARREEN WAAN JOHAR MUHAMMED TUQAMEEF DHAABARRAA UFBAAFTEE JETTANII KEESSAN NA GAAFATTAN HUNDAAF DEEBISAA KIYYA.
Ani Johar Muhammed tuqame jedhee murtii kana hinfudhanne. Sababni dhaaba ABO irraa uf baasuu kiyyaa xalayaa dhimma Alaabaa ilaalchisee maqaa HD-ABOtin gara KFO ergamteedha. Kallattiidhaan sababa xalayaa kanaa ( in protest of this particlar letter) murtii ufii kiyyaa ABO irraa uf baasuu irra gaye. Dhimmi Alaabaa dhimma Johar yokin dhima KFO qofa miti. Dhimma Ummata Oromoo waliigalaati. Johar Muhammed nama uf gayee uffirraayu hafee ummata Oromoo miliona jahatamaaf qabsaayu. Abbaa fedhe akka fedhetti ufirraa deebisus nama dandayu. Inni tuqameef jecha wanni ani dhaabarraa uf baasuf hinjiraatu.
Alaaban tun jalqaba Alaabaa ABO taatee beekamtus yeroo ammaa Alaabaa ummata Oromoo fi mallattoo qabsoo Oromoo taatee jirti. Kennaa ABOn qabsoo waggaa 50 olitiin ummata Oromoo badhaase keessaa Alaaban tun ta jalqabaati. Qubeen Afaan Oromoo ta lammataati. Kaartaan Oromiyaa ta sadaffaati. Namni alaabaa tanaaf jecha hedhamee fi ajjeefamee meeqa? Ka biyyaa baqate hoo meeqa? Ka har’a sababa alaabaa kanaa rashanamaa jiru hoo meeqa? Osoo kun tayee jiru alaaban tun ta ABO qofa qaamni biraa akka itti hinfayyadamne jedhanii xalayaa barreesun ummata Oromoo fi ABO duuydaa fi garaa taasisuun ala bu’aan isaa maali? Ergaa ummata Oromoo fi ABO walitti mufachiisu kana hoggansi dhaabaa osoo irratti hinmari’atin ergee? Yoo irratti mari’atamee ergame mariin sun ana maalif hanqate? Yoo hinmari’atamin dhimma ummata Oromoo gaddisiisu maalif nam tokkeen murtaayee faca’a? Ummanni waan kana akkamitti hubataan maalif madaalli kaasuu dhabe? Gaafilee kanaa fi kkf uf gaafadhe. Jaarmayaa sagalee keessatti hinqabnee maqaa qabadhee taa’uu irra xalayaa kana dura dhaabadhee ( protest) godhee dhaabarraa uf dhaabuu murteefadhe. Kana jechun komii biroo qabaachaa hinturre jechuu miti. Garuu ka dhaabarraa nabaasu hinturre. Obsaatuman har’a gaye. Kun ammoo waan obsaan bira dabrru naaf hintaane. Anaaf murteen kun murtee sirriidha. ABOn ummata Oromoo haala kanaan kan mufachiisu yoo ta’e eennuf qabsaayuf dhaabatti dabalamne? Akkuma namuu argutti dhimmi kun kan dallansiisaa jiru Joharis miti. KFOs miti. Hawaasa Oromoo Alaabaa tana jaaltu dallanne. Hanga yoomii Oromoon alaaban tiyyaa fi teeti mitiin waldura dhaabata.
Kanaaf, dhaabarraa uf baasun kiyya Joharif tumsuu osoo hinta’in ummata Oromoo ergaa kanaan rifate deegaree, ergaa xalayaa kanaa diduuf ( in protest of the attached letter) tayuu warri na gaafataniif ummannis akka naa hubatu barbaada. Dhaabichis kanuma akka hubatun barbaada.
Har’as borus alaaban ta ummata Oromooti.
Tags Abo alaabaa bilisummaa daawud KFO Mararaa Oromoo
Previous Naggaadeen alaabaa ar’aas waanuma kalee irra deebi’uun gad jabeessite
Next “Alaabaan ABO, Mallattoo, Fakkii fi Qabeenya ABO fi Ummata Oromooti!
Jiduu kana haasaya Obbo Jawar Mohammed TV Ubuuntu Fi OMN waliin taasiseefi Imala galateeffannaa gochaa …